Isaky ny ankohonana dia misy foana ny asa madinidinika izay azonao atao amin'ny ezaka kely ataonao. Raha te hitahiry ny vola lany amin'ny mpanao asa-tanana dia tsara kokoa raha misy karazana fitaovana fototra. Zava-dehibe noho izany ny ianaran'ny ankizy - zazalahy sy zazavavy - mampiasa fitaovana amin'ny fahazazany.
Antony ampy ahafahanay mampiditra ny sokajy Tools amin'ny pejinay fandokoana. Amin'ny fipihana ny sary dia misokatra amin'ny endrika pdf ny modely fandokoana:
Fandokoana pejy fandokoana pejy
Fitaovana pejy fandokoana - boaty ho an'ny fitaovana
Fitaovana pejy fandokoana - fantsika nahita fantsika
Fitaovana pejy fandokoana
Fitaovana pejy fandokoana - pliers
Fitaovana pejy fandokoana - tantanana
Fitaovana pejy fandokoana - screwdriver
Fitaovana pejy fandokoana - tsofa